हामी सहयोग गर्न सँधै खुशी छौं। तलका विवरणहरूका लागि ट्याप गर्नुहोस्।
समाचार, छूट र अपडेटहरू
एक ईमेल वा २ बर्षमा अपडेटहरू, नयाँ उत्पादहरू र छुटहरूमा समाचारहरू सहित। सदस्यता लिन क्लिक गर्नुहोस्.
हरायो वा तपाईंको लाइसेन्स कुञ्जी प्राप्त भएन
इजाजत पत्र कुञ्जीहरू सँधै स्वचालित रूपमा हुन्छन् र तुरून्त तपाईंको ईमेलमा पठाइन्छ। यदि तपाईंले प्राप्त गर्नुभएन भने यो तपाईंको स्पाम फोल्डरमा छ, तपाईंले गलत हिज्जेमा गर्नु भएको हुन सक्छ वा तपाईंले अर्को ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्नुभएको हुन सक्छ।
जे भए पनि तपाईको अर्डर, लाइसेन्स कुञ्जीहरू हेर्न र तपाईको इ-मेल र अन्य सेटि changeहरू परिवर्तन गर्न वा प्रयोग गर्न स्टोरमा फेरि लग इन गर्नुहोस् लाइसेन्स पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् तपाइँको सबै पछिल्ला इजाजत पत्र कुञ्जीहरू तपाइँलाई ईमेल गर्नु पर्ने पृष्ठ।
एप्पल वा गुगलबाट खरीद गरिएका अनुप्रयोगहरूमा बिक्री प्रश्नहरू
Q: यदि मैले तपाईंको अनुप्रयोग मेटाएँ वा नयाँ फोन पायो भने म कसरी फेरि अनुप्रयोग प्राप्त गर्न सक्छु?
A: उही आईडी वा ईमेल प्रयोग गरेर यसलाई पुन: डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईंले मूल रूपमा अनुप्रयोग खरीद गर्नुभयो। लि from्कमा ट्याप गर्नुहोस् तपाईंले किनेको अनुप्रयोग पुन: डाउनलोड गर्ने तरिका जान्नको लागि एप्पल आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोर वा बाट गुगल प्ले स्टोर। यदि तपाईं आश्चर्यचकित हुनुभयो कि यदि तपाईंले अनुप्रयोग खरीद गर्नुभयो भने तपाईं आफ्नो रसीदहरू एप्पल अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्लेमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Q: मैले तपाईंको अनुप्रयोग खरीद गरें। म कसरी रसिद प्राप्त गर्छु, चार्ज जाँच गर्नुहोस्, बिक्री प्रश्नहरू सोध्नुहोस्?
A: एप्पल अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्ले सम्पर्क गर्नुहोस्, जहाँबाट तपाईं किन्नुभयो। हामी बिक्रीको साथ मद्दत गर्न सक्दैनौं तर हामी हाम्रो अनुप्रयोगहरूको लागि टेक सहायताका साथ मद्दत गर्न सक्दछौं.
Q: यदि मैले भर्खरै एन्ड्रोइडबाट आईफोन वा आईफोनमा एन्ड्रोइडमा स्विच गरें भने म कसरी अनुप्रयोग नि: शुल्क स्विच गर्न सक्छु?
A: एप्पल र गुगलले सबै बिक्री नियन्त्रण गर्दछ र तिनीहरूले त्यसो गर्न कुनै तरिका प्रदान गर्दैन।
मात्रा, साइट र शैक्षिक इजाजत पत्रहरू
हाम्रो स्टोरले स्वचालित रूपमा १०० प्रतिहरूसम्म मूल्य मूल्य निर्धारण दिन्छ। हाम्रो स्टोर मा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मात्रा मा खरीद गर्न।
शिक्षा मूल्य निर्धारणको लागि योग्य हुन, तपाईं एक योग्य शैक्षिक अन्त प्रयोगकर्ता हुनु पर्छ:
संकाय, कर्मचारी वा प्रशासक, हाल एक मान्यताप्राप्त K-12 स्कूल वा उच्च शिक्षा संस्थामा वैध शैक्षिक ईमेल ठेगानाको साथ कार्यरत।
विद्यार्थी जो छन् हाल एक मान्य शैक्षिक ईमेल ठेगानाको साथ, एक मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानमा नामांकन।
कृपया अन्य बिक्री र मूल्य निर्धारण प्रश्नहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
अनुप्रयोग इजाजतपत्र सर्तहरू
इजाजतपत्रले तपाईंलाई कुनै पनि कम्प्युटरमा एप्लिकेसन स्थापना गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ जुन तपाईं स्वामित्व पाउनुहुन्छ वा आफ्नै व्यक्तिगत प्रयोगको लागि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। यदि अनुप्रयोग अन्य कम्प्युटरहरूमा अन्य मानिसहरूले प्रयोग गर्न गइरहेको छ जुन यसको आफ्नै इजाजतपत्र आवश्यक छ।
जब अपडेटहरूमा सानो सुधार र फिक्सहरू हुन्छन् (जस्तै बग फिक्सहरू, संस्करण २.० देखि २.2.0 सम्ममा।), तिनीहरू सँधै इजाजतपत्र पाएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्।
अनुप्रयोगहरूको प्रमुख अपग्रेडहरू प्रत्येक २ बर्ष वा सो देखि आउँदछ। त्यस समयमा अपग्रेड गर्दा सामान्यतया अघिल्लो खरीददारहरूको लागि नियमित मूल्यमा %०% छुट हुन्छ। अपग्रेडले अर्को २ बर्षको लागि सफ्टवेयर र टेक समर्थन समावेश गर्दछ।
प्लम आश्चर्यजनक सबै सफ्टवेयरको पूर्ण कार्यात्मक परीक्षण संस्करणहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं खरीदको लागि तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि यसको उपयुक्तता मूल्यांकन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, सबै फिर्ती अनुरोधहरू केस-द्वारा-केस आधारमा मूल्या are्कन गरिन्छ र न्यूनतम १%% प्रशोधन शुल्कको अधीनमा हुन सक्दछ। । फिर्ताको लागि अनुरोध गर्नुहोस्, कृपया तपाईंको खरीद विभागको 15० दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस्।
टेक, बिक्री र अन्य सबै प्रश्नहरूको लागि हाम्रो सम्पर्क पृष्ठको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.